LG handefa ny LG V35, X5 ary X2 any Korea Atsimo amin'ny volana Jona | Androidsis
Eder Ferreno | | LG, About us
Ny zava-drehetra dia nanondro fa ny taona 2018 dia ho taona tony ho an'ny LG eo amin'ny tsenan'ny telefaona, saingy toa samy hafa ny raharaha. Satria ny orinasa koreana dia nanomana famoahana vitsivitsy, izay hatao amin'ny volana Jona. Hatramin'ny nanolorany ny avo lenta vaovao sy ny havoana nohavaozina tamin'ity herinandro ity, ny orinasa dia manana telefaona maro vonona ho antsika.
Voalohany indrindra, ny farany avo lenta, ny LG V35 no ho avy manaraka. Saingy tsy ho irery ity telefaona ity satria maro ny fitaovana ho avy, toy ny X5 na ny X2, izay tsy misy fantatra hatreto. Mampanantena izy io fa ho volana mahery ho an'ny marika.
Ny LG V35 no avo lenta vaovao an'ny marika Koreana, izay azo antoka fa ho avy koa miaraka amin'ny ThinQ ho solon'anarana. Satria ny orinasa dia miloka betsaka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy amin'ny findainy vaovao ao anatin'ny faritra avo. Vitsy ny antsipiriany fantatra momba ilay fitaovana, toy ny hoe hanana Snapragon 845 ho mpikirakira azy.
Ny orinasa dia nanolotra tamin'ity herinandro ity ny LG Q7 sy Q7 Plus ary Ireo modely ireo dia antenaina fa ho tonga any amin'ny tanindrazany mandritra ny volana Jona.. Ka manamafy ny fisian'izy ireo eo afovoany amin'ny tsena manan-danja toa an'i Korea atsimo koa izy ireo.
Farany, Ny orinasa koa dia hanolotra ny LG X5 sy X2 any Korea atsimo, fitaovana roa mahatratra ny elanelam-pidirana. Hanana tsipiriany tsotra izy ireo ary hanana MediaTek MT6750T ho mpikirakira, ankoatran'ny RAM 2 GB sy tahiry 32 GB. Na dia natao hanomezana fahombiazana farany ambony sy fampisehoana tsara aza izy ireo amin'ny ankapobeny.
Amin'izao fotoana izao amin'ny inona ny fandefasana ireo telefaona ireo amin'ny volana jona dia any Korea atsimo ihany. Ny manaraka sisa dia mety hanaraka ny tsena. Saingy tsy manana fampahalalana momba izany izahay hatreto. Ka tsy afaka miandry fotsiny isika hoe inona no nomanin'ny LG ho antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG handefa ny LG V35, Q7, Q7 Plus, X5 ary X2 amin'ny volana Jona
mano sc dia hoy izy:
Ny laharana faha-XNUMX an'ny LG, jsjaja
Mamaly an'i Manu Sc
Snapdragon 710: Ilay processeur vaovao ho an'ny mid-range